छिस्तीमा इन्जिनियरद्धारा भुकम्प पीडितको लगत संकलन सुरु ! – ebaglung.com
छिस्तीमा इन्जिनियरद्धारा भुकम्प पीडितको लगत संकलन सुरु !
२०७३ माघ ७, शुक्रबार १४:५३	Top News, थप समाचार
हरि शर्मा, बागलुङ २०७३ माघ ७ । बागलुङ जिल्लाको दक्षिणी गाविस छिस्तीमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरव्दारा भुकम्पमा भत्किएका घर तथा भवनहरुको लगत संकलन कार्य सुरु भएको छ । जिल्लामा भुकम्पमा ठूलो क्षति पुगेको उक्त गाविसमा अझै भूकम्पबाट प्रभावित बनेका स्थानीयहरुले राहतको महसूस गर्न सकेका छैनन । गाविसका सबै ९ वटा वडामा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको बास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न प्राविधिक टोली पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सुरुमा ५ हजार र दोस्रो किस्तामा १५ हजार र तेस्रो किस्ता १० हजार बाहेक अन्य राहत पाउन नसकेको त्यहाँका भुकम्प पीडितको दुखेसो छ । गाविस सचिव चिरञ्जिवी पौडेलका अनुसार गत बर्षको बैशाख १२ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रभावित बनेको छिस्ती गाविस पूर्णरुपमा कुल २ सय ३६ घरदुरीमा क्षति पुगेको थियो भने त्यत्तिकै घरहरुमा आंशिक क्षति भएको थियो । आंशिक र पूर्ण रुपले क्षति भएका घरदुरीहरुको विवरण बुझाइएको र केही छुटेका घरदुरी भए निवेदन दिए छुटेको घरको विवरण जिल्लामा पठाउने गाविस सचिव चिरञ्जिवि पौडेलले बताए । ’
अहिले इन्जिनियरहरु झन्डै १ सय ९८ घरधुरीको विवरण संकलन का लागि आउनु भएको छ, सचिव पौडेलले भने ,जस्मा १ सय पूर्ण र ९८ आंशिक क्षतिका घरहरु रहेको जानकारी आएको छ । ठूलो संख्यामा क्षति भएको यस गाविसमा अन्य गाविसको तुलनामा थोरै घधुरीलाइ मात्र राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरु कस्तोमा बस्ने,कति क्षति भएको,पूर्ण क्षति भएकाहरुले कस्तो खालको भवन बनाउने भन्नेबारे प्राविधिकहरुले तथ्यांक लिएपछि जानकारी दिने बताईएको छ ।
जिन्दगीको दुई पल…